प्रभावकारी भएन कामकाजको भाषा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
प्रभावकारी भएन कामकाजको भाषा
दाङ , १९ वैशाख । घोराही उपमहानगरपालिका भित्र ३८ प्रतिशत थारुजातीहरुको बसोबास छ । जनसख्या बाहुल्यताका आधारमा सरकारी कामकाजका लागि स्थानीय भाषाको प्रयोग सकिने व्यवस्था अनुरुप घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा २०७४ माघ १ गते लागु गरे पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । भाषा लेखनमा समस्या ,भाषा प्रतिको चाँसो नहुनु र सरकारी कामकाजको भाषा वारे थारु समुदाय नै जानकार बन्न नसक्दा घोराही उपमहानगरपालिकाले लागु गरेको सरकारी कामकाजको थारुभाषा प्रयोगमा आउन नसकेको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिका – १७ का नगेन्द्र चौधरीले थारुभाषा बोल्न जाने पनि लेख्न नसक्दा प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । भाषा बोल्न सके पनि लेख्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘थारुभाषा सरकारी कामको भाषा मात्रै होईन , थारुभाषाको पठनपाठन पनि शुरु हुनुपर्छ । ’ तव मात्रै थारु भाषा सरकारी कामका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने उहाँले बताउुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले थारुभाषामा सरकारी कामकाजका लागि लागु गरे पनि अधिकाश थारु समुदाय यसवारे जानकार नहुदा पनि थारुभाषाको सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यस बारे थारु समुदाय नै अनविज्ञ छन , कसरी पुग्छ सेवा ? जसका लागि आम थारु समुदायलाई थारुभाषाको चलनचल्तीका बारेमा जानकार बनाउन पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
कार्यालयसंग थारुभाषा जान्ने व्यक्तिको नहुदा यो समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ काम गर्ने कर्मचारी अधिकाश नेपाली बोल्ने , थारुभाषा नबुझ्ने हुन्छन त्यसले पनि समस्या पारेको छ । ’ थारु समुदायको सेवामा सहज पहुँच, अग्रसर र उत्साहित गर्ने उद्देश्यले थारुभाषालाई कामकाजको भाषा बनाए पनि थारु समुदायकै त्यसप्रतिको चाँसो नहुदा थारुभाषाको सेवा ओझेलमा परेका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरीले बताउनुभयो ।
भाषाप्रतिको चाँसो थारुमा नहुदा यस्तो समस्या देखिएको उहाँले बताउनभयो । जसका कारण थारुभाषाको सेवा अन्यौलमा परेको उहाँको भनाई छ । थारुजातीहरु भाषा बोल्न जाने पनि लेख्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको पनि भनाई छ । जसका कारण लेखन सम्पादनकै चुनौतीका कारण कामकाजको भाषा प्रभावकारी बन्न नसकेका उहाँको भनाई छ । सरकारी कामकाजको थारुभाषालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले थारु समुदाय आफैले थारु भाषाको प्रयोग गर्न नसक्दा थारुभाषाको कामकाजीको सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । अन्य क्षेत्र भन्दा घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा थारुजातीको बसोबास बढि, नेपाली भाषा बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरुका सहजताका लागि यो भाषा लागु गरिएको हो । तर थारु जातीलेहरुले नै प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख अनुसार लागु गरिएको चार महिनामा जम्मा १÷२ वटा मात्रै निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘थारु भाषामा निवदेन आउदैनन् गर्छाैं मात्रै भनेर के गर्ने ? ’जसका कारण थारुभाषाको कामकाजको सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।थारुभाषाको लेखनीको ज्ञान थारु जातीमा हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘थारुहरु भाषा बोल्न जाने पनि लेख्न जान्दैनन् । ’ यही समस्याका कारण कामकाजमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।
थारुभाषालाई कामकाजीको भाषा प्रभावकारी रुपमा बनाउन ७५ प्रतिशत थारु वालवालिकाहरु रहेको विद्यालयमा थारुभाषाको अध्ययन अध्यापन हुन जरुरी छ । जसल गर्दा पढ्न र लेख्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्छ तब मात्रै थारुभाषाको कामकाज नियमित प्रभावकारीका साथ सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पढलेख गरेका थारु समुदायका अगुवाहरुले पनि थारुभाषाको प्रयोग शुद्धतामा ख्याल नपु¥याउदा यस्तो समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । दाङमा अन्यजातीहरु थारु भाषा बोलचाल गर्न सक्छन । तर तिनिहरुले थारु भाषामै शुद्ध लेख्न जान्दैनन जसका लागि थारुभाषाको अध्यापन जरुरी रहेका उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘ थारुभाषा बोल्ने रलेख्न सक्ने सवैजातीहरु यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । ’ तर थारुहरुले यसको प्रयोग गर्ने सोचको विकासले सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । थारुले मात्रै होईन अरु जातिहरुले पनि यसको प्रयोग गरी भाषा संरक्षण र विकास गर्न सघाउ पु¥याउन सकिने छ । चौधरीका अनुसार थारुभाषाका उपमहानगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । थारुभाषाको कामकाजका लागि सञ्चार माध्यमहरु वाट विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण , शव्दकोष खरिद , जनशक्ति व्यवस्थापन आदीका लागि उक्त रकम खर्च हुने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।